YePambaPod Mamiriro Ekuchinja uye Kugadzirira Kutakura | Ndinobva mac
Kubva muna Ndira apfuura 26, huwandu hwevashandisi vakakwanisa kuchengetera HomePod yanga ichikura zvirinani muUnited Kingdom uko zuva rekutumira rakawedzerwa kusvika Kukadzi 13. Asi kwemazuva mashoma, vashandisi vekutanga vakachengetedza yavo unit muna Ndira 26, vaona sei Iko kutumira kwako kwachinja chimiro uye kuri kugadzirira.
Parizvino, izvo hazvireve kuti ivo vanogashira pamberi paFebruary 9 Apple yechipiri foray kupinda mumunda wevatauri, mushure memutauri weiyo iPod iyo yakatanga makore mashoma apfuura, asi zvinosuwisa Akanga ari pamberi penguva yake.
Chokwadi vamwe venyu vakadhonza shamwari kana mhuri kuUK kuti vanakirwe nePodPod isati yasvika zviri pamutemo munyika meduKunyangwe sekuziva kwedu, isu tisingakwanise kuigadzira kuti itaurirane naSiri muchiSpanish, nekuti pakutanga Apple inongotipa mitauro munyika dzayakatangwa, hatizive kuti tidzivise kupinza kwakawanda kune nyika kwasvika kwadzo isina kutanga yarongwa, kana nekuti iyo vhezheni yeSiri iyo iyo HomePod ichagadzirisa ichiri kushanda zvakatoipisisa kupfuura iyo yeIOS.
Kubva ini ndiri kuMac, watinoshanda naye Luis, akachengetera yake HomePod muUnited Kingdom muna Ndira 26, saka achave mumwe wekutanga kunakidzwa nemutauri weApple, saka kana iwe uri kumirira kuongorora kwekutanga muchiSpanish cheichi chitsva. Apple chigadzirwa, usavarega vatitevere pasocial network.
Uye zvakare, kuburikidza nepodcast yatinoita vhiki rega rega paYouTube, unogona kuona ruoko rwekutanga, iyo yekutanga mifananidzo uye kuenzanisa kwePodPod muhukuru nezvimwe zvigadzirwa zveApple. Iwe zvakare uchakwanisa kuita rarama mibvunzo kuitira kuti mumwe wedu agadzirise kusahadzika kwako kana mibvunzo yaunayo pamusoro pechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Chinzvimbo chePambaPod chinoshanduka uye chinogadzirira kutumira